DAAWO VIDEO:Qudbad Yaab Leh Cali Ciise Cabdi Soomaliland Bahdiley Soo celinta Sool.
December 31, 2018 marqaan 3
Cali Ciise Cabdi Ayaa Qudbad Kajeediyey Xaflad uu Uga Hadlayey Musharaxnimadiisa Iyo waxa uu Puntland Ka Badali doono,Isagoo Ka Hadlay Siyaasada Puntland. Waxaana uu ka Hadlay Soo celinta Gobolada Maqan Iyo Siyaasada Puntland Halkay Ku
DAAWO VIDEO:DEG DEG Magacyada Golaha Barlamaanka Puntland iyo Qabiiladoda Iyo magacyada.
December 31, 2018 marqaan 4
Guddiga xallinta khilaafaadka iyo ansixinta Baarlamanka ee Puntland ayaa haatan ku dhawaaqay lixdan iyo lixda xubnood ee Golaha wakiilada cusub. Guddiga oo la magacaabay 3-dii bishan December ayaa mudda 27 maalmood ah ku hawllanaa xallinta
DAAWO VIDEO:DEG DEG Ciidamadi Ugu badnaa Sland Ka Goostay Puntlandna Ku Biiray
December 31, 2018 marqaan 1
Mujaahid Cabdi Xaaji Raan abaanduulahii Aaga bari ee ciidamada somaliland oo si toos ah Ugu soo Biiray Ciidanka Dulmi diid ee Uu hogaaminaayo Cornayl Caare ayaa maanta lagu soo dhaweeyay Magaalada Qardho. Cutubyo ciidan ah
Daawo:- Abaanduule muhiim ah iyo ciidamo badan oo kasoo goostay Somaliand ayaa lagu soo dhaweeyay Magaalada Qardho + fariin kusocoto Muuse Biixi.
December 31, 2018 marqaan 7
Daawo Xog:- Imaaraadka oo la ogaaday in ay lahaayeen maskaxda Amarkii dhawaan kasoo baxay madaxwayne Gaas.
December 31, 2018 marqaan 2
Sida ay Ilo xog-ogaal ah sheegayaan sirdoonka dowladda Imaaraadka ayaa ka dambeeyey go’aankii shalay uu degaanada Puntland Madaxweyne Gaas uu kaga mamnuucay madaxda dowlada iyo shaqaalaha Villa Somalia. Imaaraadka ayaa la sheegay in ay si
Daawo:- Qaar kamid ah isimada Dhulbahante oo go’aano adag garoowe kaga dhawaaqay “Dadka aan xulanay waa laga saaray doorashasa”.
Qaar kamid ah cuqaasha, waxgaradka iyo isimada kasoo jeeda degaanada gobalka Sool ee beelaha Dhulbahante oo warbaahinta kula hadlay magaalada Garoowe ee xarunta Puntland ayaa ka hadlay arima salka ku haya doorashooyinka Puntland. Isimada iyo
Akhriso:- Alshabaab oo shaacisay magaca iyo Qabiilka naftii haligihii isku qarxiyay Tiyaatarka Qaranka.
Al Shabaab ayaa muddo todobaad ah kadib shaaciyay magaca ruuxii isku qarxiyay afaafka hore ee tiyaatarka qaranka, halkaasi oo dad badan ay ku dhinteen. Al Shabaab ayaa sidoo kale baahiyay qabiilka uu kasoo jeedo ruuxii
Warbixin:- Musharaxnimada Dr.Cali Ciise waxaa ka dhalan kara laba arin oo xasaasi ah “Akhriso”.
December 31, 2018 marqaan 13
Shalay ayuu si rasmi ah xaflad ka dhacday Garowe ugu shaaciyey Dr. Cali Ciise Cabdi in uu yahay musharax u taagan xilka Madaxweyne ee Puntland. Toddobaad kahor uun ayey soo shaac baxday hanka Dr. Cali
Daawo:- Musharax Morgan oo hadalo adag kasheegay Garoowe.
December 31, 2018 marqaan 0
Gen. Moorgan oo kamid ahaa Saraakiishii Dawladii Dhexe haatana usharaxan xilka madaxtinimada Puntland oo Warbaahinta la hadlay ayaa ka hadlay Qorshihiisa uu ku doonayo inuu ku Qabto Hogaanka Puntland, Wuxuuna sidoo kale ka hadlay Muhiimada
Warbixin Xasaasi ah:- Yaa ku guuleysanaya Doorashada Puntland?.
Hoos ayaan ku falanqayn doonaa doorashada Puntland ee 2019-ka iyo qofka ku habboon in la doorto laakiin marka hore sheeko yar. Buur baa waa’ foolatay Waxa la yiri Buur baa waa’ foolatay. Saa waxay dhashay Jiir ama Doolli,
DAAWO VIDEO:Axmed Zaki Showgii Qarnigani happy New Year 2019 London
DAAWO:Madaxweyne Gaas oo Tuute u xidhan doona Tukaraq & Saraakiisha ciidamada Puntland oo amar la siiyey
Wararkii ugu dambeeyey ee hada aan ka helayno madaxtooyada Puntland ee magaalada Garowe ayaa waxa ay sheegayaan in uu ku wajahan jiidaha hore ee deegaanka Tukaraq madaxweynaha Puntland Dr. C/weli Maxamed Cali Gaas oo koormeer
Xildhibaan katirsan Baarlamaanka Somalia oo Muqdisho ku geeriyooday.
December 30, 2018 marqaan 0
Xildhibaan ka mid ahaa baarlamaanka Soomaaliya ayaa la xaqiijiyay inuu ku geeriyooday magaalada Muqdisho. Xildhibaan Axmed Mayow Cabdulle, oo ku magac dheeraa Korneyl Ruush ayaa la xaqiijiyay inuu ku geeriyooday magaalada Muqdisho kadib markii wadnaha
Daawo:- 15Musharax oo garoowe kaga dhawaaqay go’aano cusub oo yaab leh.
December 30, 2018 marqaan 4
Ilaa 15 musharax oo u taagan qabashada xilka madaxweyne ee Puntland ayaa shir ay ku yeesheen magaalada Garoowe waxa ay uga hadleen arimo la xiriira amaanka doorashada, go’aamadii kasoo baxay gudiga amniga. Musharaxiintan ayaa ka
Shirka xisbiga oo Laysugu Awood sheegtay iyo ONLF oo seeftu dul saaran tahay.
Mustafa xisbiga Anagaa ku soo darnay !!” sidaas waxa shirkii xisbiga kayidhii isagoon Hadalka Leex Leexin Gudoomiye Axmed Shide oo cadaynaya inay Talada deegaanku Gacantiisa kujirta, Mustafana yahay uun shakhsi isagoo dibad Joog ah ay